Sina translucent fotsy M104 / Milky fotsy M102 / Opaque fotsy M101 orinasa sy mpanamboatra | Baizan
Fotsy fotsy M104 / Milky fotsy M102 / Opaque fotsy M101
Sarimihetsika Baivar pvb loko Baizan ho an'ny vera voaravaka laminated.
Baizan dia afaka manome sarimihetsika miloko betsaka ho an'ny mpanjifa misafidy amin'ny loko milamina sy marina.
habetsan'ny famokarana> 12000t isan-taona
Fotoana fanaterana: 5-15 andro
Matetika izahay manome sary 3 momba ny entana ao anaty entana ho an'ny mpanjifa.
Voalohany, alohan'ny hametrahana azy dia maka sary fitoeram-bokatra tsy misy entana izahay
Sarin'ny kaontenera feno
Avy eo, mampiasa forklift izahay mba hampidirana ny kaontenera. Mba hampihenana ny vidin'ny fitaterana dia mila mandamina ny entana amin'ny fomba mety izahay mba hampiasana feno ny fitoeran-kaontenera. Ireto manaraka ireto dia ny vokatra amin'ny famaritana isan-karazany sy ny habetsaky ny fatrany 20GP fitoerany.
Karazana famaritana sy fahaizan'ny kaontenera
hateviny （mm） sakany (mm) halavany (m / 卷) 20'kontainer (㎡)
Sarin'ny varavarana fitoeran-javatra
Farany, atolotray ny sary varavarana fitoeran-javatra, misy fampahalalana isan-karazany toy ny isa fitoeran-javatra sns.
Ny fomba fitaterana
Matetika misy fomba fitaterana telo safidinao
1. fitaterana an-dranomasina
Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia misafidy fitaterana an-dranomasina. Ny fitaterana an-dranomasina dia manana tombony amin'ny habetsaky ny be sy ny vidiny ambany.
Miankina amin'ny halaviran'ny mpanjifa, ny fotoana fandefasana dia 1 herinandro ka hatramin'ny 2 volana
2. fitaterana an-dalamby
Amin'ireo firenena mifanila aminy dia afaka mampiasa transportaion amin'ny lalamby isika
2. fitaterana an'habakabaka
Raha ampitahaina amin'ny fitaterana an-dranomasina sy ny fitaterana an-dalamby dia manana tombony amin'ny hafainganana izy io ary tsy iharan'ny fameperana ny toe-tany. Raha manana baiko maika ny mpanjifa dia afaka misafidy fitaterana an'habakabaka isika.
Previous: maitso maivana GN101 / Vridis GN108
Manaraka: BK104 volontsôkôlà antonony / BK103 volontany antonony
maitso maivana GN101 / Vridis GN108
R101 mena / mena mena R108